Dood Cilmiyeed Balaadhan Oo Maamulka Magaalada Jigjiga Iyo 20-ka Xaafadood Ay Kaga Wadahadlayeen Sii Xoojinta Bilicda Iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha Magaalada Ayaa Kaqabsoomay Qaryaan Dhoodaan - Cakaara News
Dood Cilmiyeed Balaadhan Oo Maamulka Magaalada Jigjiga Iyo 20-ka Xaafadood Ay Kaga Wadahadlayeen Sii Xoojinta Bilicda Iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha Magaalada Ayaa Kaqabsoomay Qaryaan Dhoodaan
Jigjiga(CN) Talaado.Mar.10.2015, munaasibada dood cilmiyeedkan balaadhan oo uu shir gudoominyay Mayorka maamulka magaalada Jigjiga mudane Cabdirisaaq Saxane ayaa looga gol lahaa lagagana hadlay sidii loo sii xoojinlahaa bilicda iyo kaabashaaysha dhaqaalaha magaalada Jigjiga oo wakhtiyadii ugu danbeeyay si xawli ah uga socda, kana qabsoomay mid kamida hoolasha Qaryaan Dhoodaan.
Shirkan ayaa sidoo kale waxaa kasoo qaybagalay maareeyaaha magaalada mudane Cabdikariim Cawil (Fanax), maareeyaha wakaalada bilicda iyo nadaafada ee magaalada Jigjiga mudane Cumar Shariif C/laahi, geedi socodyada muhiimka ah ee MMJ iyo wakiilada maamulada iyo shacabka 20-ka xaafadood ee MM.Jigjiga.
Dood cilmiyeedkan oo ahaa mid diirada saarayay islaxisaabtanka iyo dar-dar galinta adeegyada horumarineed ee magaalada Jigjiga ayaa laga hadlay qodobo dhowr ah oo ay kamid ahaayeen bilicda magaalada, kaabayaasha dhaqaalaha, iyo adeegayada kala duwan ee horumarineed kuwaas oo ay masuuliyiin MMJ iyo wakaailadii shacabku fahan buuxa kayeesheen isla markaana isla qaateen sidii loo laba jibaari lahaa daddaalkan xukuumadeed ee kadhanka ah MMJ.
Kulankan oo la isku afgartay ka shacab ahaan iyo ka maamul ahaan in la xoojiyo markastana lasii dar dar galiyo adeegyada muhiimka ah iyo kuwan bilicda ayaa kamid noqonaya qorshayaasha ay xukuumadu markasta ugu hawlantahay horumarinta magaalooyinka.
Waxaana xusid mudan in Maamulka magaalada Jigjiga uu dhamaystiray mashaariico badan oo kaabayaasha dhaqaalaha kamida iyadoo haatana ay jiraan kuwo badan oo gabo gabo maraya. Taasoo kamid noqonaysa yoolasha la hiigsanayo ee ah sidii ay magaaladu u soo jiidan lahayd markasta maalgashiga.